लिक भएर एकाएक भाइरल बन्याे शिक्षक-विद्यार्थीकाे यस्तो हर्कत हेर्नुहोस (भिडियाेसहित) - Darpanpost
» समाज » सामाजिक संञ्जाल » स्वास्थ्य/जीवनशैली अंक: 20732
लिक भएर एकाएक भाइरल बन्याे शिक्षक-विद्यार्थीकाे यस्तो हर्कत हेर्नुहोस (भिडियाेसहित)
Darpanpost बुधबार, आषाढ २५, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडाैं : चम्पारणको केसरियामा एक शिक्षकले मर्यादाको रेखा नाघेर पवित्र सम्बन्धलाई लज्जित बनाइदिएका छन् । त्यहाँको चाद पसरास्थित मध्य विद्यालयका प्रधान शिक्षकको यो कर्तुतले पुरै इलाका स्तब्ध बनेको छ ।
यसैबीच विद्यालयका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार मिश्राले पनि प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । तर, प्रहरीले न्यायालयबाट पक्राउ पूर्जी नपाएका कारण अहिलेसम्म आरोपी शिक्षकलाई गिरफ्तार गरेको छैन् ।
ट्युसन क्लासमा भयो सेक्स –समाचार अनुसार मध्य विद्यालयका शिक्षक रुपेश कोचिङ क्लास पनि चलाउथे । उनले कोचिङमै विद्यालयकी छात्रालाई आफ्नो सिकार बनाएका हुन् । त्यही बेला भिडियो क्लिप बनेको थियो । प्रहरीले भिडियो कसले बनायो र छात्रासँग अरुले पनि अवैध सम्बन्ध राखे की भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि रुपेशलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक मुन्द्रिका प्रसादले घटनाको प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
मसाज सेन्टरमा खुलमखुल्ला यस्तो धन्दा –यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने ? थाई, स्वीडिश, डिप टिश्यू अर्थात् ट्रिगर आदि आदि । दर्जनौँ मसाजका विकल्प प्रस्तुत गरिन्छन् । महिला या युवती कसबाट मसाज गराउनु हुन्छ ? यो तपाईको ईच्छा । ग्राहक कोठामा जान्छन् । करिब ३० मिनेट बितेपछि मसाज गर्लले केही कुरा सोध्छिन् । त्यो सुनेर ग्राहक अक्कबक्क समेत पर्छन् ।
सर, एक्ट्रा सर्भिस के लिनुहुन्छ ? ग्राहकले कुनै प्रतिक्रिया जनायो भने शुरु हुन्छ, अवैध धन्दा कोठामा नै तय गरिन्छ एक्ट्रा सर्भिस रेट भारतको दिल्लीमा रहेका करिब ३४ वटा मसाज सेन्टरको रिपोर्टका आधारमा यो बिषय बाहिरिएको हो । जहाँ मसाज गर्ने महिलाले ग्राहकसँग एक्स्ट्रा रेटको तय गर्दछन् । एक मसाज गर्लका अनुसार एक्स्ट्रा मसाजका लागि एक जनाको २ हजारदेखि रेट तय हुने गर्दछ । यसमा दुवै पक्षको परामर्शका आधारमा रेट तय हुने गर्दछ ।
श्रीमतीलाई मासु किन्न पठाएर भाञ्जी बलात्कार –आफ्नै भान्जी बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको शिवसताक्षी—११ स्थित दुधेबाट एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । तर, सहोदर मामाले जबरजस्ती करणी गरेको घटना ढाकछोप गर्न परिवारका सदस्य नै सक्रिय भएको समेत खुलेको छ । दुधेका ४१ वर्षिय मामाले आफ्नै घरमा बस्ने १६ वर्षीया भान्जीलाई करणी गरेपछि घटना ढाकछोपको प्रयास भएको हो । बिहिबार बिहान घरमा कोही नभएको मौकाछोपी मामाले करणी गरेको र कसैलाई नभन्न दबाब दिएको बालिकाले बताइन् ।
‘घरमा कोही पनि हुनुहुन्थ्यो, माइजुलाई पनि मासु किन्न पठाएर मामाले मलाई मुख थुनेर त्यस्तो गर्नुभयो’ किशोरीले भनिन् । स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत ती बालिकाले आइतबार साथीलाई रुँदै घटनाबारे सुनाएपछि उनीहरुले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ढुण्डीराज गिरीले अभियुक्त मामालाई सोमबार नै पक्राउ गरेको बताए ।
पीडितका बुबा भारतको दार्जि्लिङ र आमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारण प्रहरीमा जाहेरी दिने अभिभावक समेत नरहेको अवस्थामा प्रहरीको आग्रहमा विद्यालयकी एक शिक्षिकाले जाहेरी दर्ता गरेकी छन् । अभियुक्त पक्राउ परेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी पीडित बालिकाकी आमालाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेर ‘मेडिकल टेष्ट’ र जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलले पीडित बालिका र अभियुक्तको समेत ‘मेडिकल टेष्ट’ गराएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । दार्जि्लिङ घर भएकी पीडित बालिका अहिले विद्यालय र प्रहरीको संरक्षणमा छिन् । ती बालिका विगत २ वर्षदेखि मावलमा बसेर अध्ययनरत थिइन् । मामाले यस अघि पनि चुम्बन गर्ने लगायतका शारीरिक र्दुव्यवहार गर्दै आएको पीडित बालिकाले बताइन् । अनलाइन मार्गले तयार पारेकाे सामग्री ।